Global Voices teny Malagasy » Nepal: Nametra-pialàna ny Praiministra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jolay 2010 8:15 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Politika
Nanao filazana ampahibemaso ny fametraham-pialany ny praiministra Nepaley Madhav Kumar Nepal  omaly nandritry ny lahateny iray mivantana tamin’ny fahitalavitra .
Nandray ny fahefana Ing. Nepal ny volana May 2009 tao aorian’ny nandimbiasany an’i Prachanda  (Pushpa Kumar Dahal), filoha mpitondra ny CPN (Maoista), niala tao aorian’ny tsy fifanarahany tamin’ny filoha noho ny fandroahany ny lehiben’ny tafika taorian'ny fifandirana momba ny fandraisana ireo mpikomy Maoista fahiny ho ao amin’ny tafi-bahoaka.
Milaza  i Anisha Bhattarai ao amin'ny blaogy New Beginning fa :
Tokony hamàrana ny sàkana ara-politika eo amin’ny firenena ny fialan’i Ing. Nepal izay nanamafy ny fiarahan’ny governemanta tsy nahavita naneho akory ny fandaniana ny lalampanorenana tamin’ny volana May 28 2010 sy nanitatra ny andàlana  mikasika ny antenimiera mpanorina nandritry ny taona iray.
Maneho ireo lafin-kevitra ambadika  manodidina ilay fifandiran-kevitra i Gopal Sharma ao amin’ny blaogin’ny Reuters:
Tsy faly tamin’ity fametraham-pialana ity  i NepaleseAbroad.com:
Purushottam Shah (digitalsubway) mandefa (tsilian-tsofina) tweets :
Araka ny filazan ’ ireo antoko politika maro, dia ny UCPN (Maoista), ny Nepali Congress ary ny CPN (UML) no manomboka miresaka ny hanangana governemanta vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/03/6880/
 Madhav Kumar Nepal: http://en.wikipedia.org/wiki/Madhav_Kumar_Nepal
 lahateny iray mivantana tamin’ny fahitalavitra: http://beacononline.wordpress.com/2010/07/01/nepal-nepal-pm-announces-resignation-to-end-deadlock/
 nanitatra ny andàlana: http://blog4mynepal.blogspot.com/2010/06/nepal-constituent-assembly-extension.html
 lafin-kevitra ambadika: http://blogs.reuters.com/gopal-sharma/2010/07/01/qa-nepal-power-struggle-intensifies-after-pm-quits/
 Tsy faly tamin’ity fametraham-pialana ity: http://www.nepaleseabroad.com/2010/07/nepalese-prime-minister-madhav-kumar-nepal-resigns/
 mandefa (tsilian-tsofina) tweets: http://twitter.com/digitalsubway/status/17503848605